‘ह्वाइट हाउसभित्र कमाण्डो पठाएर ट्रम्पलाई यसरि बाहिर निकाल्न सकिन्छ’: ओबामा – Enepali Samchar
‘ह्वाइट हाउसभित्र कमाण्डो पठाएर ट्रम्पलाई यसरि बाहिर निकाल्न सकिन्छ’: ओबामा
November 21, 2020 adminLeaveaComment on ‘ह्वाइट हाउसभित्र कमाण्डो पठाएर ट्रम्पलाई यसरि बाहिर निकाल्न सकिन्छ’: ओबामा
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइट आउसभित्र कमाण्डो पठाएर बाहिर निकाल्न सकिने बताएका छन् । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनाव हारिसकेका ट्रम्पले जिद्दी गर्दै चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएका छन् ।
गत ३ नोभेम्बरयता ह्वाइट आउस बाहिर नदेखिएका ट्रम्पलाई कमाण्डो पठाएर पनि बाहिर निकाल्न सकिन्छ भनी पूर्व राष्ट्रपतिले बोलेका हुन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा ओबामाले भनेका छन्, ‘यदि कोही ह्वाइट हाउसको कुनामा बसिरहेको भए, उनलाई बाहिर निकाल्न म हाम्रो नेभिसील कमाण्डोहरूको टोली पठाउँथें ।’
नेभिसीललाई विश्वकै खतरनाक कमाण्डो टोलीका रूपमा लिइन्छ । सन् २०११ मे २ को रात पाकिस्तानको एबोट्टावादमा अल कायदाका नेता ओसामा बीन लादेनको हत्या यही नेभिसीलले गरेको थियो ।
२०२० को चिर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले आगामी २० जनवरीबाट सत्ता सम्हाल्दैछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले हारेको कुरा स्वीकार गरेका छैनन् । यद्यपि योभन्दा अघि ट्रम्पले सन् २०२४ को चुनावमा पनि आफैँ उम्मेदवार भएर उठ्ने बताइसकेका छन् । उनको त्यो छनकले भने उनले हार स्वीकारिसकेका छन् भन्ने विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
लकडाउनको सदुपयोग गर्नेहरु अहिले यसरि मनग्य आम्दानी गर्दै
हिटर प्रयोग गर्नुअघि थाहा पाउनै पर्ने ५ कुरा
आजदेखि खुल्यो अर्को नयाँ आईपीओ, भर्ने होइन त शेयर ?
यस्तो खतरनाक खेलमा ओली : राम बहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा ! यस्तो छ भित्रि तयारी
ज्ञानेन्द्र शाही र स्वास्थ्य मन्त्री हृदयस त्रिपाठीविच किन भयो यसरि चर्काचर्की ?